Igumbi elihonjiswe ngehotele - I-Airbnb
Igumbi elihonjiswe ngehotele
Igumbi libonisa uthando lwethu loyilo lwangoku & olumnandi, ifenitshala kunye nezityalo zangaphakathi. Sikwimeko ngaseLake Wakatipu & imizuzu ukuya kumbindi weQueenstown. Ifanelekile isibini okanye ezimbini singles kunye nebhedi inkosi eyahlulahlulwe.
Eli gumbi linendawo epholileyo, ihombise yangoku kunye nefenitshala. Ibhedi yinkosi eyahlulahlulwe ngoko ke inokumiselwa isibini okanye yahlulwe ngabantu ababini abahamba kunye. Ibhedi iya kusekwa njengenkosi ngokungagqibekanga. Ukuba ufuna ii singles ezimbini, nceda usicebise xa ubhukisha.
Le yipropathi yethu yabucala kwaye yiyo kuphela esinayo kwindawo yokuhlala ngoko ke asikwazi ukukunika nawaphi na amagumbi. Nceda ujonge iifoto kubandakanya neendawo zayo kwigumbi lokuhlala kwaye ucetyiswe ukuba eli ayilogumbi eliphambi kwechibi nangona linombono olinganiselweyo wechibi ukusuka kwifestile esecaleni.
4.76 out of 5 stars from 478 reviews
4.76 · Izimvo eziyi-478
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi478
Indawo yethu yokuhlala enemiqolo emibini (ichibi elingaphambili kunye namagumbi asecaleni kwendlela) kwaye imeko kwicala lechibi lendlela iFrankton enomzila wokuhamba / webhayisekile kunye neBoatshed Cafe edumileyo kumgama wokuhamba. Indawo yethu ikwisakhiwo esisecaleni kwendlela. Ezinye iindawo zokutyela ezimbalwa kunye neebhari phakathi kwemizuzu emi-5 ukuya kweli-10 umgama wokuhamba yiBoatshed Cafe, Altitude Brewery, Bombay Palace, Organic Thai2Go, Frankton Pizzaria, Frankton Arm Tavern, McDonalds & Burger King.
Ipropathi yindlu yokungena kunye nokuhamba. Asinakukwazi ukudibana nawe xa ufika kodwa siyafumaneka ngefowuni okanye ngo-Airbnb ukuze sikuncede ukuba ubunemibuzo.